အရသာဖူး – Grab Love Story
လမ်းထိပ်ရှိ ပျံကျဈေးလေးမှာ အရင်ကထက်ပိုပြီး စည်လာသည်။ဘန်းခင်းရောင်းသော ဈေးသည်များနှင့် ဝါးတဲ ပလတ်စတစ်မိုးဆိုင်တန်းလေးက လမ်းဒေါင့်တဖြတ်ပင် ကျော်၍ သွားခဲ့ချေပြီ။ တနေ့တနေ့ ဈေးရောင်းချသူ ဈေးသည်တွေ တိုးလာသလို အနီးအနားရှိ တခြားရပ်ကွက်တွေ ကလဲ ဒီပျံကျဈေးလေးကို လာပြီးအားပေးကြတော့ ဈေးဝယ်သူတွေကပါ ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားနေသည်။ ဈေးတည်နေရာကလဲ ကတ္တရာလမ်းမကြီး နှစ်ခုကြားတွင် ထိုလမ်းမကြီးနှစ်ခုကို ထိပ်တိုက် ကန့်လန့်ဖြတ်ရှိ နေသော လမ်း၏ ဝဲယာလမ်းဘေးတွင် ရှိသည်။ ဈေးရှိနေသောလမ်းက ကတ္တရာမခင်းရသေး။ ကျောက်ကြမ်းလမ်း ဖြစ်ပြီး ချိုင့်ခွက်ကြီးတွေပင် ရှိနေလေတော့ ဘယ်ကား၊ ဘယ်ဆိုက်ကားကမှ ဈေးရှိသောလမ်းထဲကို ဖြတ်မမောင်း။ ဒီတော့ ဈေးသည်ရော ဈေးဝယ်ကြသူတွေရော လွတ်လွတ်လပ်လပ် စိတ်ချလက်ချရှိတော့ ဒီပျံကျဈေးလေးက တနေ့တခြား စည်သထက် စည်ကားလာရလေသည်။ ပျံကျဈေးလေးတနေ့တခြား စည်ကားလေ တပြုံးပြုံးဖြင့် ဟန်ကျလေဖြစ်နေသူကတော့ ဦးမောင်တင်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဦးမောင်တင်သည် အသက် (၄၅)နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီး အရပ်ရှည်ရှည် ဒေါင် ကောင်းကောင်း အသားမဲမဲဖြစ်သည်။ ရွှေရောင်ကိုင်းနှင့် မျက်မှန်အနက်ကြီးကို မချွတ်တမ်း တပ်ထားလေ့ရှိသဖြင့် သူ့မျက်လုံးတွေက ဘယ်ကိုကြည့်နေသည်ဆိုသည်ကို ဘယ်သူမှ မသိရ။ မျက်နှာက အမြဲတမ်းပြုံးဖြဲဖြဲနှင့် နေတတ်ပြီး လူကထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ဗလကကောင်းကောင်း ဆိုပေမဲ့ ခါးကတော့ ခပ်နွဲ့နွဲ့ဖြစ်သည်။
ဦးမောင်တင်က ဒီဈေးလေးအတွက် ဈေးကောက်ကို လိုင်စင်ဆွဲထားသူထံမှ ပြန်ဝယ်ထားသူဖြစ်ပြီး ဒီပျံကျဈေးလေး၏ ဈေးကောက်ကို သူက ကောက်သည်။ တဆိုင်ဝင် တဆိုင်ထွက် သူကိုယ်တိုင် ဈေးကောက်လိုက်ကောက်သည်မဟုတ်ဘဲ အသက်(၂၀)လောက်ရှိသော တင်ငွေဆိုသော ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို လခပေး၍ ကောက်ခိုင်းထားသည်။ တင်ငွေက အရင်တုံးက ဆိုက်ကားနင်း သော်လည်း ယခုဈေးကောက်ဖြစ်သွားတော့ ဆိုက်ကား မနင်းတော့ချေ။ ဈေးလေးတွေင် ဦးမောင်တင်က ဈေးကောက် ကောက်သောလုပ်ငန်းကို လုပ်ရုံမျှမက နေ့ပြန်တိုးပေးသော လုပ်ငန်းကိုပင် ပူးတွဲ၍ လုပ်လိုက်သေးသည်။ အကျိုးပေးက သန်သည်မို့ ဦးမောင်တင်မှာ သူ့ပိုင်ငွေဖြင့်ပင် မလုံလောက်၍ လမ်းထိပ်တွင် တီဗွီပြင်ဆိုင်ဖွင့်ထားသော အခြောက်ခင်ဝင်းဆီကပင် ငွေယူရသည်ဆိုတာ တဈေးလုံးအသိပင်ဖြစ်သည်။ အခြောက်ခင်ဝင်းဆိုတာက သူ့ကွယ်ရာမှာခေါ်သည့် နာမည်ဖြစ်သည်။ ခင်ဝင်းက တကယ့်အခြောက်မဟုတ် သနပ်ခါးလည်းမလိမ်း။ မိတ်ကပ်လည်းမလိမ်း ပတ်ချွဲနှပ်ချွဲလည်း မလုပ်ပေ။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဝင်းက အသားဖြူဖြူ လူပုံက ခပ်နွဲ့နွဲ့ဖြစ်ပြီး မိန်းမချော ချောသည်။စကားပြောလျှင် ယောကျာ်ားတွေလိုဘဲ ပြောသည်။ထိုကဲ့သို့ လူပုံနွဲ့၍ မိန်းမချော ချောသောကြောင့် သူ့ကိုတဈေးလုံးက အခြောက် ခင်ဝင်းဟု ကွယ်ရာမှာ ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခင်ဝင်းက သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက် ရှိပြီး ခလေးအဖေဖြစ်ကာ အသက်က (၃၀)လောက်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ နေ့ပြန်တိုးပေးသော လုပ်ငန်းတွင်ကျယ် လှလွန်းသဖြင့် သူ့ငွေနှင့်သူမလောက်သဖြင့် ဦးမောင်တင်က ခင်ဝင်းထံမှ ငွေကိုလဲ ယူရသည်ဖြစ်သည်။ ဦးမောင်တင်၏ အိမ်မှာ ရပ်ကွက်အစွန်နားတွင် ရှိပြီး ပေ(၄၀) (၆၀)နှစ်ကွက်တွဲ မြေကွက်ထဲ တွင် တွဲဆောက်ထားသည့် ခြံဝန်းထဲတွင် သစ်ပင်ပန်းမန်တွေက တခြံလုံး အပြည့်စိုက်ထားလေသည်။ ဦးမောင်တင် တွင် သားကြီးသမီးကြီးတွေရှိပြီး ဦးမောင်တင်၏မိန်းမက ထိုအိမ်ထောင်ကွဲ သားသမီးတွေနောက်လိုက်၍ နေတာက များသည်။ အိမ်တွင်က ဦးမောင်တင်တယောက်ထဲ နေသည်က များသည်။ တနေ့တခြား ဈေးရောင်းသူတွေလဲတိုး၊ ဈေးဝယ်သူတွေလဲ များလာသော ပျံကျဈေးလေးကြောင့် ဦးမောင်တင်တစ်ယောက် ကတော့ အကျိုးရှိပြီးရင်း ရှိကာနေရသည်။ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသော ဈေးသည် တွေကတော့ မြတ်မမြတ်မသိ။ ဦးမောင်တင်ကတော့ သပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်သာ ဖြစ်နေရပါတော့သည်။ ” ဟယ်…. အမသီ….. သိမ်းနေပြီလား ….. ” လှမ်း၍မေးလိုက်သော ဘေးချင်းကပ်ဆိုင်လေးထဲက ကွမ်း၊ ကွမ်းသီးရောင်းသော ဥမ္မာဆိုသော ကောင်မလေး၏ အသံကိုကြားရသဖြင့် ငါးခြောက်စည်းလေးတွေကို ခြင်းတောင်းထဲသို့ ထည့်နေသော မသီက လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ ” ခုမှ ဈေးက ကွဲတောင်မကွဲသေးဘူး အမကလဲ … ” ” အိမ်မှာက အလတ်ကောင်က နေမကောင်းနေပြန်ဘူး ညီမရယ်။ ဒီနေ့ ဆေးခန်းပြရမယ်လေ ဒါကြောင့် စောစော သိမ်းရတာ ညီမရေ….. ” ” အဲ့ဒါဆိုလည်း အမ ဟိုလူတွေ အဝယ်များတဲ့ ငါးနှပ်ခြောက် အာပြဲခြောက်စည်းထားတဲ့ အစည်းလေးတွေ ညီမဆီထားခဲ့။ ဘယ်နှစ်စည်းဆိုတာ ရေပြီးထားခဲ့။
ညီမရောင်းပေးမယ် ” ” ကျေးဇူးပါဘဲ ဥမ္မာ ရယ်…… ငါ့ ညီမနဲ့ တင်ငွေတို့ အမြန်ယူဖြစ်ပါစေတော်… နှစ်လုံးလဲ ငါးရာကွက် တစ်ထောင်ကွက်… လောက် ပေါက်ပါစေတော် …. ” ” အို… အမကလဲ… ” ရည်းစားဖြစ်သူ ဈေးကောက်တင်ငွေ၏ နာမည်ပါလာသဖြင့် အသက်(၁၇)နှစ်သာရှိသေးပြီး ဖြူဖြူဖွေးဖွေး တစ်တစ်ရစ်ရစ်ဖြင့် ကစ်ကစ်လေး လှနေသော ဥမ္မာတစ်ယောက် ဖြူဖွေးသော သူမ၏ မျက်နှာလေး ရဲကနဲဖြစ်သွား အောင်ကို ရှက်သွားရသည်။ ” အမကလည်း….. ငါးရာကွက် တစ်ထောင်ကွက်တောင် မထိုးနိုင်ပါဘူး… သိပ်ကြိုက်မှ တရာကွက်လောက် ထိုးနိင်တာပါ… အမရယ်… ” ဟု ဥမ္မာက အရှက်ပြေပြောလိုက်သည်။မသီက ခြင်းတောင်းထဲ ထည့်ထားပြီးဖြစ်နေသော ငါးခြောက်စည်း လေးတွေကို ဥမ္မာ၏ ကွမ်းဗန်းလေးဘေးတွင် လာ၍စီပေးနေသည်။ ဥမ္မာက မသီကိုကြည့်ရင်း သက်ပြင်းတချက် လေးလေးပင်ပင် ချလိုက်သည်။ မသီအသက်က အလွန်ဆုံးရှိမှ (၂၆) (၂၇)ထက်မပို။ ကလေးက (၂)နှစ်ကြီး (၂)နှစ်ငယ် သုံးယောက်။ ယောကျာ်းက ပန်းနာရင်ကြပ်သမား။ ဆိုက်ကားကို နေ့တိုင်းမဆွဲနိုင်။ မထွက်တစ်ရက် ထွက်တရက်ဖြင့် ဖြစ်သည်။ ကလေး(၃)ယောက် အမေသာဆိုသည် မသီက နဂိုကပင် အရွယ်တင်သော မျိုးရိုးက ဆင်းသက်လာလို့လားမသိ။ ခပ်မြင့်မြင့်အရပ်လေးနှင့် လိုက်ဖက်ညီသော ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်က တောင့်တင်း၍ ဖေါင်းတင်းနေသည်။ ဘယ်နေရာမှာမှ သူမ၏အသားအရေတို့က ပျော့တွဲ၍မနေ။ကားအိနေသော တင်သားကြီးများ က မိန်းမချင်းပင် မနာလိုချင်စရာဖြစ်နေသည်။ ရုပ်ရည်က ကုလားဆင်လေးဖြစ်ပြီး အသားအရည်က နဂိုက ဖြူစွပ်ခဲ့ပုံ ရသော်လည်း အခုတော့ နေလောင်ထားသဖြင့် နီစပ်စပ်လေးဖြစ်နေရသည်။ ” ကျမလည်း အမသီ…. ဘတ်သီဘတ်သီ ဖြစ်နေတာ ကြည့်ပြီး လင်ယူရမှာတောင် ကြောက်နေတယ်… အမသီ…ရာ… ” ” အို… ဘာဆိုင်လို့လဲအေ… ဆင်းရဲတယ်… ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ…မမြဲပါဘူးအေ… ခု ဆင်းရဲပေမဲ့.. နောင် ချမ်းသာချင် ချမ်းသာမှာပဲ.. အမတို့ အပျိုတုံးက တကိုယ်လုံးရွှေကိုညွတ်နေတာ… အိမ်ထောင်ကျတော့လည်း မိဘတွေက ပေးလိုက်သေးတယ်။ ယောက်ျားက မမာတော့ အလုပ်မလုပ်နိုင်။ ဝင်ငွေမရှိ သူ့ဆေးကုရတော့ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေထုခွဲလိုက်ရတာပေါ့… လင်ယူတိုင်းလည်း မဆင်းရဲပါဘူးအေ… ဒါထားတော့ ဒီအပတ် သုံးလုံး ဘာရထားသေးလဲ… ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဈေးထိပ်က မုန့်ဖတ်ရောင်းတဲ့ စန်းကြည်မ တို့ပေါက်သွားတယ်။ အပြီးပေါက်ဂဏန်းရလိုက်တယ်ဆိုဘဲ…. ” ” ဟုတ်တယ်…. အမ… သူတို့ပြောပြတော့… မထိမဖြစ် အပြီးလဲဖြစ်… ဆိုလား အဲ့ဒီဂဏန်းရလိုက်လို့တဲ့.. ” ” အေးဟယ်… တို့များကျတော့လည်း မရဘူး… ” ” ကျမ ကိုတင်ငွေကို မှာထားတယ်။ အဲ့ဒီ မထိမဖြစ် အပြီးလဲဖြစ် ဆိုတဲ့ဟာတွေ့ရင် နှစ်လုံးဖြစ်ဖြစ် သုံးလုံးဖြစ်ဖြစ် ပေးဖို့ မှာထားတယ်။ ရခဲ့ရင် အမသီကိုပေးမယ်သိလား… ” ” အေး…. ညီမ မမေ့နဲ့အုံး.. အမ..သွားမယ်… အော်… ငါးခြောက်စည်းလေးတွေက တစ်စီးတရာ့ငါးဆယ်ဘဲ… များများယူရင်တော့ နှစ်စီးနှစ်ရာ့ငါးဆယ်နဲ့သာ ရောင်းလိုက် ညီမရာ…ကဲ…အမ…သွားပြီ…” “.. ရတယ်…အမ… စိတ်ချပြီးသာ… သွားပေတော့….” ခြင်းတောင်းကြီးကို လက်တဖက်မှဆွဲ၍ မသီတစ်ယောက် ဥမ္မာကို ကျောပေး၍ တရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာသွားတော့သည်။ ” ဒီ စပို့ရှပ်လေးက ဘယ်လောက်လဲ….” ရည်းစားဖြစ်သူ တင်ငွေ၏အသံကို ကြားလိုက်ရသဖြင့် မသီကို မျက်စိတစ်ဆုံးကြည့်နေသော ဥမ္မာက သူမ၏ ဘေးချင်းကပ်ရက် အထည်ရောင်းသော ဆိုင်လေးသို့ ဖြတ်ကနဲ ကြည့်လိုက်သည်။ တင်ငွေက ချိတ်ဆွဲထား သော စပို့ရှပ်အပြာနုရောင်လေးကို လက်တဖက်ဖြင့် ကိုင်ကြည့်ရင်း မေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ” ငါ ရောင်းတာတော့ သုံးထောင်ဘဲ… ” အထည်ရောင်းသော မုဆိုးမ မကြည်၏အသံက ထွက်ပေါ်၍လာသည်။ တင်ငွေ၏ မျက်နှာက အိုသွားကာ စပို့ရှပ် လေးကို အားတက်သရော ကိုင်ကြည့်နေသည့် သူ၏လက်ကို ချက်ချင်းရုတ်သိမ်းလိုက်သည်။ ဥမ္မာ၏ရင်ထဲတွင် ချစ်သူတင်ငွေ၏အဖြစ်ကို မြင်ရကာ နာကျင်စွာ ခံစားမိလိုက်သည်။ တင်ငွေ မဝယ်နိုင်ပါ။ ဒါကို ဥမ္မာကသိသည်။ တင်ငွေ၏ အလုပ်ရှင် ဦးမောင်တင်က သူကသာ တနေ့တခြား ချမ်းသာလာသည်။ သူ့အလုပ်သမားကိုတော့ ထမင်းနပ်မှန်ရုံသာ လုပ်ခပေးထားသည်။ဆယ်လီသမားပီပီ သေချာ တွက်၍ပေးထားသော လုပ်ခလစာကြောင့် တင်ငွေမှာ ထမင်းနပ်မှန်ရုံသာ ရှိသည်။ တခါတရံ လက်ဘက်ရည် သောက်ချင်တာတောင် မသောက်နိုင်ခဲ့ပေ။ တင်ငွေက ဦးမောင်တင်အတွက် ဈေးကောက် ကောက်ရုံသာမဟုတ် နေ့ပြန်တိုးပါ သိမ်းပေးရသည်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဦးမောင်တင်က သူတနေ့တခြား စီးပွားတက်လာတာဟာ သူ့ အလုပ်သမားရဲ့ အထောက်အကူလဲ ပါသင့်သလောက် ပါသည်ဆိုတာကို စဉ်းစား၍ ငဲ့ညှာမှာ မဟုတ် လုပ်နိုင်ရင်လုပ် မလုပ်နိုင်ရင်သွား။
လူတွေ တပုံကြီးရှိသည်။ ဘယ်သူ့ခေါ်ခိုင်းခိုင်းရသည်ဟူသော စီးပွားရေးသမားစစ်စစ်ပင် ဖြစ်သည်။ ချစ်သူတင်ငွေ၏ ဖြစ်အင်ကြောင့် စိတ်ထဲရင်ထဲတွင်နင့်သွားရသော ဥမ္မာတယောက် ကလေးတွေး တွေးကာ လျှောက်ပြီး စဉ်းစားနေမိလိုက်သည်။ ” ဟဲ့… တင်ငွေ….မယူတော့ဘူးလား… မောင်လေး… ကြိုက်ရင်… ယူသွားလေ… မမက… မောင်လေး အတွက်… လက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်…. ” မကြည်က ခပ်ပေါ့ပေါ့လေသံဖြင့် သဘောတွေကောင်းနေသည်။ ” ပြီးတော့ မောင်လေးက… မမ…ကို အဝှါပြု….” မကြည် အထည်ဆိုင်၏ဟိုဖက်ဘေးက ဘေးချင်းကပ်လျက်ရှိ ကြက်သားသယ် ကိုတုတ်က ဝင်ပြောလိုက်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဈေးသည်တွေရော ဈေးဝယ်သူတွေပါ ပွဲကျသွားရသည်။မုဆိုးမ မကြည်ကလဲ မလျှော့.. ။ ” ဒီမှာ… ကိုကြက်နာရဲ့…..မောင်လေးတင်ငွေ… ယူလို့ကတော့… ကျမက…အကုန်ပေးမှာသိလား.. ရှင်က ဘာမနာလိုဖြစ်နေရတာလဲ…. ကြက်နာရဲ့….. ” ဟုချက်ခြင်း တုံ့ပြန်၍ ပြောလိုက်သည်။ဥမ္မာ၏ ရင်ထဲတွင်တော့ ဝမ်းနည်းစိတ်တွေရော၊ဒေါသစိတ်တွေပါ ဖြစ်လျှက် “မသာမကြီး…. နှာဘူးမကြီး..” ဟု တိုးတိုးလေး ရေရွတ်မိလိုက်ပါတော့သည်။ တင်ငွေကတော့ ခပ်ရှက်ရှက်ဖြင့် နောက်ကိုမျှပင် လှည့်မကြည့်တော့ဘဲ ထွက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါလေတော့သည်။ ဦးမောင်တင်က ငွေသိမ်းပြီးရင် တအောင့်တနားဘဲ ဈေးမှာနေ၍ အိမ်ပြန်သွားတတ်သည်။ မသီကလဲ ဦးမောင်တင် တစ်ယောက်အိမ်သို့ ပြန်သွားသည်ကို တွေရ၍ ဈေးသိမ်းပြီး သူမ၏ အိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ ပြီးတော့ ရေမိုးချိုး ဖီးလိမ်း၍ အဝတ်အစားလဲကာ ဦးမောင်တင်၏ အိမ်သို့ထွက်လာခဲ့သည်။မသီရောက်သွားတော့ ဦးမောင်တင်က ရေချိုးပြီးခါစ ဖြစ်ပုံရသည်။ ကိုယ်လုံးတီးနှင့်ဖြစ်ပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ်တွင် ပုဆိုးတစ်ထည်သာရှိသည်။ ” မသီရယ်…. ငါက သူဌေးမဟုတ်ဘူးဟ…. နင့် ဥစ္စာလည်း ကြည့်လုပ်ပါဦး…” ” ကျမ…ယူထားတာများမှန်း သိပါတယ်…. ဦးလေးရယ်…. ဒီနေ့ အလတ်ကောင် ဆေးထိုးရမှာမို့ပါ.. တစ်ထောင်ဘဲ ပေးပါ…. ဦးလေးရယ်….” ” ခက်လိုက်တာဟာ….. နင်ကလဲ….ကဲ…လာ….” မသီက ဦးမောင်တင်၏ နောက်မှ ဝင်လိုက်သွားသည်။ဦးမောင်တင်၏အိမ်က ပြူတင်းပေါက်တွေ မဖွင့်ရသေးတာ လား….မကြာခင် မိုးချုပ်တော့မှာမို့ ပြန်ပိတ်ထားတာလားမသိ။ပြူတင်းပေါက်တွေ ပိတ်နေကာ လှောင်နေသည်။ ” အခုလို…လူရှင်းတာကောင်းတယ်။အိမ်ကို… လာပြောတာလဲကောင်းတယ်။ ဈေးမှာဆို ငါက ပြောတိုင်းပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ တော်ကြာ နင့်ကိုတော့ပေးတယ်။ သူတို့ကျတော့ မရဘူး ဆိုတာတွေက လာအုံးမယ် ပူညံပူညံတွေ ဖြစ်နေအုံးမယ်…” ဦးမောင်တင်က သူဈေးကို ကိုင်ကိုင်လာသော လက်ဆွဲအိတ်ထဲတွင် စာရင်းစာအုပ်ကို ရှာနေလေသည်။ ဒါသူလုပ်နေကျဖြစ်သည်။မသီကကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ရှိနေသော စားပွဲသေးပုပုလေးပေါ်မှာ တွေ့ရသော စာအုပ်တစ် အုပ်ကို ကောက်၍ယူကာ လှန်ကြည့်လိုက်သည်။ကာတွန်း….. မဂဇင်းတွေဆို မသီက ငယ်ငယ်ကထဲက ဝါသနာ ပါသည်။ ” အို” အသံက အပြင်သို့ ထွက်မလာပါ။ ရင်ထဲမှာပင် သိမ့်သိမ့်တုန်ယင်း ပျောက်သွားသည်။ သူမ ကောက်ယူကာ လှန်လိုက်သော စာအုပ်ထဲတွင်တွေ့ရသည်က အင်္ဂလိပ်တွေ ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ လိုးနေကြ ပုံတွေ ဖြစ်သည်။လီးကြီးတွေက နဲတာကြီးတွေမဟုတ်။ မသီတစ်ယောက် တကိုယ်လုံး ဖိန်းကနဲ ရှိန်းကနဲဖြစ်ကာ ခန္ဒာကိုယ်ထဲက သူမ၏သွေးသားတို့ ကြွ၍ သွားရသည်။ ကမန်းကတန်းပင် စာမျက်နှာစုံအောင် ကြည့်လိုက်ပြီးမှ စာအုပ်လေးကို စားပွဲပုလေးပေါ်သို့ ပြန်၍ အမှတ်တမဲ့ ချထားလိုက်သည်။ ဦးမောင်တင်က သူ၏ လက်ဆွဲအိတ်ထဲမှ စာရင်းစာအုပ်ကို မျက်စိမှေးပြီး နှိုက်နေသည်။ ” တောက်… သေတော့မှာဘဲ…. စာရင်းစာအုပ် ပျောက်နေပြန်ပြီဟာ.. မသီ… အဲ့ဒီစားပွဲလေး အောက်မှာ ကြည့်စမ်းဟာ….” မသီက ကုန်းကုန်းကြီးလုပ်ကာ စားပွဲလေးအောက်သို့ ငုံ့၍ကြည့်သည်။ ဖင်ဝိုင်းဝိုင်းကြီးက ဦးမောင်တင်၏ မျက်နှာ နှင့်အပ်နေသည်။
ဦးမောင်တင်က မတော်တဆလိုလိုနှင့် မသီ၏ ဖင်ကြားသို့ သူ့မျက်နှာကြီးကို ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ ” တောက်….ငါလေ….နင့်ဖင်ကြီးက…..” ဦးမောင်တင်က မသီကိုပင် ငေါက်လိုက်သေးသည်။မသီ၏ဖင်ကြီးက ကလေးသုံးယောက်မွေးပြီးသည့် တိုင်အောင် အိစက်ဖွံ့ထွားနေဆဲ….။ ” အယ်…. ကန်တော့….ကန်တော့…ဦးလေး… ကန်တော့….” ဦးမောင်တင်၏လက်ကြီးက မသီ၏ဖင်ကြီးကို မိမိရရ ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ “ထိုင်စမ်းပါဟာ ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့ ….. ” ” ဦးလေးဘဲ…. စာအုပ်ရှာခိုင်းပြီးတော့ ….. ” ” ကဲ…. မတွေ့လဲနေပစေ … နေအုံး…. နင် ဘယ်လောက်ယူမှာ…. တစ်ထောင်… ဟုတ်လား .. ” ဦးမောင်တင်က တစ်ထောင်တန် အထပ်လိုက် လက်လေးလုံးခန့်ကို သူနှင့်မသီကြားတွင် ချလိုက်သည်။ ” တွေ့လား ငွေက ဒါဘဲရှိတော့တယ်… မနက်ဖြန် ဟိုအခြောက်ခင်ဝင်းကိုလဲ ငါကပေးရအုံးမှာ.. ငါ့မှာ သိပ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး… သူ့ဆီက ယူလုပ်နေရတာ…. ” ငွေကိုသိန်းချီကိုင်ထားရင်း အတိုးဖြင့် ငွေတစ်ထောင်ချေးဖို့ကို အော်ပရာထွက်နေသော ဦးမောင်တင်ကို မသီကငေး၍ ကြည့်နေမိသည်။ ” နင့်ကို ငါ တစ်ခုပြောမယ်…. မသီ… ” “… ဟုတ်ကဲ့ ဦးလေး …. ပြောပါ … ” ” နင် … နှစ်ထောင်ယူသွား…. ဟုတ်ပြီလား … ” ” ရှင် …. နှစ်ထောင် … ” ” အေးလေ …. ရော့ယူစမ်းပါဟာ … နင်ကလဲ .. ” တစ်ထောင်တန် သစ်သစ်မာမာကြီး နှစ်ရွက်က မသီ၏လက်ထဲသို့ ရောက်သွားသည်။ မသီမှာ ကြက်သေသေပြီး ဦးမောင်တင်ကို ငေးနေသည်။ ” နင် …. ဘယ်သူ့မှ မပြောနဲ့နော် … ” ” ရှင် …. ” ” ဒီကိစ္စ ဘယ်သူ့မှ မပြောနဲ့လို့ …. နောက်ဆိုရင်လဲ ငါ့ဆီ အခုလိုဘဲလာခဲ့… ကြားလား.. ” စကားတပြောပြောနှင့် ဦးမောင်တင်၏ လက်တစ်ဖက်က မသီ၏ ဆီးစပ်ကို ပွတ်ပေးနေသည်။ မသီဖြတ်ကနဲ သတိဝင်လာသည်။ ” မဟုတ်ဖူးလေ.. ခဏလေးနဲ့ ငွေနှစ်ထောင်ရတာ… နောက်ပြီး အရင်ကြွေးတွေလဲ မပေးနဲ့တော့.. နင်ကလဲ…. ခုဟာက… နင်နဲ့ငါနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲဘဲ သိမဲ့ဟာကို… ” မသီတစ်ယောက် ဟုတ်နိုးနိုး ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားသည်။
ကလေးသုံးယောက်ရခဲ့အောင် နေခဲ့ပြီးမှ လင်က မမာတော့ လီးနဲ့ဝေးခဲ့တာ မသီတစ်ယောက် ကြာခဲ့ရပြီ။စောစောကဓါတ်ပုံတွေ တွေ့လိုက်ရကထဲက သူမသွေးသားတွေက သိသိသာသာလှုပ်ရှား၍ နေခဲ့ရသည်။ ပြီးတော့မှ တနေကုန်ဈေးထိုင်ရောင်းလို့ ခုနှစ်ရာ ရှစ်ရာမြတ်ဖို့က မလွယ်…. ခုတော့ … နှစ်ထောင်ဆိုတာ နဲနဲနောနော မဟုတ်…. ။ ” လာ…. ရှေ့တိုး… ဒီနားကိုလာ… အေး လှဲလိုက်…. ” မသီတစ်ယောက် ဦးမောင်တင် ခိုင်းသည်ကို စိတ်ညို့ခံထားရသူပမာ လုပ်ပေးနေမိသည်။ မသီက အပေါ်နှုတ်ခမ်းလေးကို အောက်နှုတ်ခမ်းလေးဖြင့် ကိုက်လိုက်ရင်း မျက်စေ့အစုံကို တင်းတင်းလေး မှေးမှိတ်ထားလိုက်သည်။ မသီ၏ ခါးပေါ်က ပါတိတ်ထဘီအဟောင်းလေးသည် သူမ၏ ခါးဆီသို့ ပုံလျှက်သား လေး လန်တက်သွားသည်။ ” ဟ…. အား …. ” ဦးမောင်တင်၏ မျက်နှာကြီး ဝင်းလက်သွားသည်။မသီ၏ တသားမွေး တသွေးလှ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ မမာသောလင်နှင့် ကင်းဝေးနေ၍လားမသိ ဖူးဖူးပြည့်ပြည့်ကြီး ပြောင်ဝင်း၍ ဖွေးဥနေသည်။ မသီ၏လက်ထဲမှ တစ်ထောင်တန်အသစ်ချပ်ချွတ်လေး နှစ်ရွက်မှာ ချွေးတွေစိုလာသည်။နွမ်းကြေလာသည်။မသီ၏ဖောင်းဖောင်းကစ်ကစ် စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီး နှစ်ခုကြား အပေါ်ထိပ်နားတွင် ဟတတ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးထဲမှ အပေါ်သို့ တောင်တောင် လေး ထွက်နေသော စောက်စေ့အတက်လေးမှာ အကွဲကြောင်း အပေါ်သို့ပင် နှီးတပြားခန့်ထွက်၍ ပေါ်နေသည်။ ထိုအတက်လေးသည် တချက်တည်းနှင့် ရမ္မက်မီးတွေ ဟုန်းကနဲ လင်းထိန်တောက် လောင်သွားနိုင်သည့် အဓိက ကာမခလုတ်လေးဖြစ်သည်။ ဒီနေရာက မထိမဖြစ်သော နေရာလေး ဖြစ်သည်။ ဦးမောင်တင်က သူ၏လက်မဖြင့် မသီ၏စောက်စေ့လေးကို ဖွဖွရွရွလေး ထိလိုက် ပွတ်လိုက် လုပ်နေသည်။ ” … အ…. ဦး…. အင်း….. ဦးလေး… အို….အို …’ မသီမှာ အသံပင်ထွက်သွားရလေသည်။ သူမ၏ ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးမှာလဲ ကား၍ထွက်သွားရပေသည်။မသီ၏စောက်ဖုတ်ကြီးက လက်တစ်ခုပ်မက ထွားကြိုင်းဖောင်းကားနေရာ သွားရည်ယိုစရာကြီး ဖြစ်နေသည်။ ကြည့်ရင်းကပင် ဦးမောင်တင်သည် မနေနိုင်အောင် ဖြစ်၍လာရသည်။ သူ၏ခါးမှ ပုဆိုးကိုချွတ်၍ ချလိုက်သည်။ ဦးမောင်တင်၏လီးကြီးက ထိပ်လန်နေသော်လည်း ဒစ်က အကုန်အစင် ပေါ်၍မနေပါ။ ဦးမောင်တင်က ပုဆိုးချွတ်ချပြီးသည်နှင့် မသီ၏ အလိုအလျှောက် ကား၍ သွားခဲ့ပြီးသော ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ဝင်၍ ထိုင်လိုက်ပြီး သူမ၏ ဒူးနှစ်လုံးကို ကွေး၍ ထောင်ကာ ကားပေးလိုက်သည်။ ပီးတော့ သူ၏ လီးချောင်းကြီးကို လက်တဖက်က ကိုင်၍ မသီ၏ ပြူထွက်နေသော မထိလျှင် မဖြစ်သည့် စောက်စေ့လေးကို လီးချောင်းကြီးထိပ်နှင့် ထိုး၍ပွတ်သည်။ ” ….အ…. ကျွတ် …. ကျွတ် … အ … အ.. အင်း .. ဟင်း … ဟ … ဟင်း …” မသီ၏ အသက်အောင့်ထားးရာမှ ထွက်ပေါ်၍လာသော လည်ချောင်းသံလေးတွေက ပွင့်အံ့၍ လာသည်။ သူမ၏ ခါးလေးပင်လျှင် ကော့ကနဲ တစ်ချက်ဖြစ်သွားရသေးသည်။
လေးငါးကြိမ် လောက်ပင် လီးတန်ကြီးထိပ်က သူမ၏ စောက်စေ့လေးကို ထိတွေ့ပွတ်တိုက်ပေးပြီးတော့မှ စောက်ပတ်ဝသို့ လီးချောင်းကြီးက ခေါင်းစိုက်၍ တိုးဝင်သွားသည်။ ” ….. ဘွတ် … ဗြွတ် …. စွပ် …. ” ” …. ဝင်လား … မသီ …. ” ” … အင်း …. ဟင်း … ” မသီက ပါးစပ်ကိုပိတ်ရင်း ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။ဦးမောင်တင်တစ်ယောက် စကားအလွန်ပြောသည်။ ” အရမ်းကြပ်လား … ဟင် … ” ” … ဟင့် … အင်း … . ” မသီက မျက်လုံးလေးများ မှိတ်ထားရင်း ခေါင်းခါပြသည်။ ခါးပေါ်သို့ လှန်ပြီးတင်ထားသော သူမ၏ ထဘီကို ပေါင်ရင်းနားထိ ထဘီစကို ဆွဲ၍ ဖုံးသည်။ ဦးမောင်တင်၏ လက်က ထဘီစပေါ်သို့ ရောက်လာပြီး ခါးပေါ်သို့ ပြန်၍ဆွဲလှန်ကာ တင်သည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ ခပ်တင်းတင်းဝင်နေသော လီးကို ငုံ့ကြည့်ရင်း ဖင်ကို ရှေ့သို့ တိုးမိသည်။ ” ဗြစ် … ဘွတ် … ဖျစ် … ဇွပ် … ” ” ဟို….. အိုး …. ကျွတ် …. ကျွတ် … ကျွတ် …. ” အဝင်မကြပ်သော်လည်း လီးက ရှည်လျားလှသည်။ စောက်မွှေးလေးများ ဖုံးအုပ်သွားသည်အထိ ထဘီ ကို ထပ်ပြီးဆွဲချရင်း မသီ မျက်လုံးလေးမှတ်ပြီး ငြီးသည်။ ဦးမောင်တင်က ထဘီစကို အတင်းပြန်ဆွဲတင် ရင်းက ဖိလိုးရင်း ညှောင့်လိုက်သည်။ ” ပြွတ် … ပလွတ်…. ပြွတ် … ဖွတ် …. ” ” ဟင့် … ဟင့် …. ဟင့်အင်း …. ဟင့် … အင့် … ” မသီက ကျောလေးကို နေရာရွေ့သည်။ဦးမောင်တင်က ခေါင်းအုံးအဟောင်းလေးကို လှမ်းဆွဲကာ မသီ၏ တင်ပါးကြီးအောက်သို့ ထိုးထည့်သည်။မသီက ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းချကာ ခါးလေးကို ကော့ပေး လိုက်သည်။ သူမ၏ခါးအောက်သို့ ခေါင်းအုံးလေး ရောက်သွားသောအခါ မသီ၏စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ပို၍ တင်းကားပြဲလန်သွားလေရာ ဦးမောင်တင်၏ လီးကြီးဝင်နေသည်ကို လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီး မြင်နေရလေတော့သည်။ ” ဘွတ်… ပြွတ်…. ဖွတ် … ” ” အင့် … ဟင့် …. ဟင့် … အင့် …. ” မသီက ပါးစပ်ကို မဟတဟလေး ပိတ်၍ထားသည်။လက်တဖက်ကလည်း သူမ၏ ထဘီစကို မကြာခဏ ဆွဲ၍ ချနေတတ်ပြန်သည်။ ဦးမောင်တင်က သူ၏လီးကြီးကို မြိန်ရေယှက်ရေ လိုးသွင်းနေ၏ မသီ၏ စောက်ဖုတ်ကြီး နီရဲ၍လာသည်။ စောက်ခေါင်းထဲမှ အရည်များရွှဲကျ၍ လာသည်။ဦးမောင်တင်က မထိမဖြစ်သော စောက်စေ့ရဲရဲလေးကို လက်တဖက်ဖြင့် ကလိရင်း ခပ်သွက်သွက်လေး ဆောင့်လိုးပေးလိုက်ရာ မသီမှာ လင်ကမလိုးသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်ကတကြောင်း အလိုးကျွမ်းကျင်သော ဦးမောင်တင်၏ အကိုင်အတွယ် အပွတ်အသပ်တို့က တကြောင်း အကောင်းကြီးကောင်းကာ ဟန်ပင်မဆောင်နိုင်တော့ဘဲ ဦးမောင်တင်၏ ဖင်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆောင့်ဆောင့်ဆွဲရင်း အောက်မှနေ၍ အားရပါးရ ကော့ကော့ပေးလိုက်ပါတော့သည်။ ” ဘွပ် … စွပ် … ပြွတ် … ” ” အင့် … အင့် …. အမလေး …. ကျွတ် …ကျွတ် ” စောက်စေ့လေးကို ပွတ်မြဲပွတ်ပေးရင်းက အသဲခိုက်အောင် တိုးဝင်သွားသော လီးထိပ်ကြီးက သားအိမ်ဝကို စူးစူးစိုက်စိုက်ကြီး ထိုးမိသွားရာ သူမ၏ မျက်လုံးထဲ မီးဝင်းဝင်းတောက်သွားမိသည်။ ” ရှီး … အား …. အား…. အရမ်းထိတာဘဲ … ” မရည်ရွယ်ဘဲ နှုတ်မှလဲ လွှတ်ကနဲ ပြောမိသည်။ နှစ်ယောက်သား အပြန်အလှန် ဆောင့်လိုးကြရင်း မကြာမှီ တခဏ အတွင်းမှာပင် နှစ်ဦးသား ပြိုင်တူပင် သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်၍ ပြီးသွားကြလေသည်။ သာမာန်အားဖြင့် ဆိုလျှင် မသီက ဒီထက်ပိုကြာအောင် ထိန်းထားနိုင်သော်လည်း ဦးမောင်တင်က အားရပါးရ လိုးနေရင်းက သူမ၏ မထိမဖြစ်သော စောက်စေ့လေးကို လက်ဖြင့် ပွတ်ပေးရင်း အားကုန်ဆောင့်၍ လိုးလိုက်ခြင်းကြောင့် မသီမှာ ဆက်၍ မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ မထိမဖြစ် အရာလေးကား သူမကို ပြီးဖြစ်အောင် ပြီးသွားစေခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ဦးမောင်တင်က မသီ၏ ထွာထွားစို့စို့ နို့ကြီးနှစ်လုံးပေါ်တွင် မျက်နှာကို မှေးတင်ရင်း မှိန်းနေသည်။ မသီကတော့ လေးပင်လှသော ဦးမောင်တင်၏ကိုယ်ကြီးကို တင်းကနဲ တင်းကနဲ တင်းခံနေရလေသည်။ မသီ၏ကိုယ်လုံးလေး တဖက်ဘေးတွင်တော့ တစ်ထောင်တန် အသစ်လေး နှစ်ရွက်မှာ ခေါက်ရက်လေး လုံးကြေ၍ ကျလျှက် ရှိနေပါတော့လေသည်။ သစ်ရွက်ကြို သစ်ကိုင်းကြားမှ လရောင်လေးက ပြပြလေး ကျရောက်၍နေသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက် လေရူးလေးအဝှေ့တွင် သစ်ရွက်လေးတွေကို လေရှုးလေးက တိုးဝှေ့သွားသည်။ အသံလေးတွေက မကြာခဏထွက်ပေါ်၍ နေသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှ ဖြတ်သန်း၍ မောင်းသွားသော ကားသံက တချက် တချက် လေအဝှေ့မှာ ပါ၍လာရသည်။ ” အကို … ” လေသံမျှသာဖြင့်ခေါ်လိုက်သော ဥမ္မာ၏ အသံလေးကြောင့် တင်ငွေက ဥမ္မာ၏မျက်နှာလေးကို လှမ်း၍ ကြည့်လိုက်သည်။ ” ဟင် .. ” လုံးတစ်နေသော ပေါင်တံလေးပေါ်ရှိ တင်းရင်း၍နေသော ပတ်လည်စင်း ထဘီလေးပေါ်တွင် ရွေ့လျား ကာ ပွတ်သပ်ပေးနေသော တင်ငွေ၏လက်က ပေါင်သားအိအိလေးကို ဖွဖွလေး ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်သည်။ မျက်လုံးလေးအဝိုင်းသားဖြင့် သူ့မျက်နှာကို ငေးမော၍ကြည့်နေသော ဥမ္မာ၏ ထံမှ ဘာစကားမျှ ရုတ်တရက် ထွက်ပေါ်၍မလာ… ။ ” ပြောလေ….. ဥမ္မာ …” ဒီတော့မှသူမက သက်ပြင်း မြှင်းမြှင်းလေး တစ်ခုကို လွှင့်ထုတ်လိုက်ရင်း တင်ငွေ၏ခါးပေါ်တွင် ရောက်၍နေသော သူမ၏ လက်လေးက ပို၍တင်းကြပ်စွာ ဆွဲဖက်လိုက်သည်။ ” အကို …. ညနေက ကြည့်တဲ့စပို့ရှပ်ကို ဝယ်မလို့ ကိုင်ကြည့်တာလား … ” ” အင်း … လကုန်ရင် … အကိုဝမ်းကွဲ တစ်ယောက်မင်္ဂလာဆောင်ကို သွားစရာရှိလို့ … အဆင်လေးကလည်း လှလို့ မေးကြည့်မိတာပါ… ဥမ္မာရယ် ..တကယ်တော့ လဲ မဝယ်နိုင်ပါဘူးကွာ . ” ” အို … အကိုရယ် …. ” ဥမ္မာက တင်ငွေ၏ကိုယ်လုံးကြီးကို သိမ်းကြိုးဖက်၍ တင်ငွေ၏ပါးတဖက်ကို သူမ၏ နှာသီးလုံးလုံးလေး ထိုးမြုပ်ကာ တချက်မျှနမ်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူမ၏မျက်နှာလေးကို တင်ငွေ၏ မျက်နှာမှ မခွာဘဲ ပါးချင်းအပ်ထားလိုက်သည်။ ဥမ္မာ၏ တင်းတင်းရစ်ရစ် ပေါင်လုံးလေးကို ဖွဖွလေး ဆုတ်ကိုင်ထားသော တင်ငွေ၏လက်တဖက်က သူမ၏ပေါင်လေးပေါ်မှ ခွာကာ ဥမ္မာ၏ မေးဖျားလေးကို အသာလေးထိန်း၍ ကိုင်ထားရင်း သူ၏မျက်နှာ ကို လှည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဥမ္မာ၏ ခါးလေးပေါ်တွင် ဖက်၍ထားသော သူ၏လက်က ဥမ္မာ၏ လည်ဂုတ်လေးပေါ်သို့ ရွှေ့လျားရောက်ရှိ၍လာကာ သူမ မျက်နှာလေးကို ဆွဲ၍ ယူလိုက်ရင်း သူ၏ နှုတ်ခမ်းများက ဥမ္မာ၏ နှုတ်ခမ်းလေးများအပေါ်သို့ ဖိကပ်၍ ကျရောက်သွားတော့သည်။ သူမ၏ဘေးတွင်ချထားသော ဥမ္မာ၏ လက်လေးတဖက်ကပါ ကြွ၍တက်လာပြီး တင်ငွေ၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို ဥမ္မာသည် သူမ၏ လက်လေးနှစ်ဖက်ဖြင့် သိမ်းကြုံး၍ ဖက်လိုက်လေ တော့သည်။ မူလက ဥမ္မာ၏ပေါင်လုံးပေါ်မှ လာခဲ့သော တင်ငွေ၏လက်တဖက်ကတော့ သူမ၏ မေးဖျား လေးမှခွာကာ ဥမ္မာ၏ ခါးလေးပေါ် ရောက်၍သွားသည်။ ပြီးတော့ ချက်ခြင်းလိုပင် အောက်ဖက်သို့ လျှောဆင်းသွားပြီး ဥမ္မာ၏လုံးတစ်၍နေသော ဖင်သားကြီးများပေါ်သို့ ရောက်၍သွားကာ ဖင်သားကြီး များကို ဖွဖွလေး ပွတ်၍ပေးနေတော့လေသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် ရောက်ရှိနေသည့် နေရာကတော့ သူတို့တတွေ၏ နေအိမ်နှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် ရှိနေသော ကတ္တရာလမ်းမကြီးမှ ဖယ်ဆင်းသွားသည့် မြေနီလမ်းလေး ဘေးတွင် ဖြစ်သည်။ ထိုမြေနီလမ်းလေး ၏ တဖက်တွင် မူလတန်းကျောင်းဝင်းကြီးက ရှိနေပြီး လမ်း၏ အခြား တဖက်တွင်တော့ ရေကန်ကြီးတစ်ကန်က ရှိနေလေသည်။ မြေနီလမ်လေး၏ ဘေးတဖက်တချက်တွင် ဂျပန် ပိတောက်ပင်များနှင့် ကုက္ကိုလ်ပင် ပျိုများက တန်းစီ၍ ရှိနေကြသည်။ အချိန်က ည(၇)နာရီေ ကျော်ကျော်လောက်ဖြစ်လေသည်။ လမ်းတ လျှောက်တွင် လမ်းမီးတိုင်များရှိသော်လည်း တပ်ဆင်ထားသော မီးလုံးမီးချောင်းများ ကျွမ်းမည် စိုးသဖြင့် မနက် မိုးလင်းကာနီး (၃) နာရီလောက်မှ နံနက်(၆)နာရီ လောက်အထိသာ ဓာတ်အား ပို့လွှတ်သည်။ တစ်လမ်းလုံး မှောင်မှောင်မဲမဲလေး ဖြစ်နေသည်။
ထိုနေရာလေးကို တရပ်ကွက်လုံးရှိ လူငယ် လူရွယ်များက ချစ်သူလမ်းကြားလေးဟု ခေါ်တွင်ကြသည်။ တင်ငွေတို့ စုံတွဲအပြင် အခြားသော စုံတွဲ (၃) (၄) တွဲကလည်း လမ်းဘေးအစပ် သစ်ရိပ်လေးများတွင် ကိုယ့်အလုပ်နှင့်ကိုယ် ရှုတ်နေကြသည်။ တင်ငွေသည် သူ၏နှုတ်ခမ်းများကို ဥမ္မာ၏ နှုတ်ခမ်းများဆီမှ ခွာလိုက်သည်။ မှးမှိတ်ထားသော မျက်လုံးလေးများကို မဖွင့်ဘဲ ဥမ္မာ၏ မျက်နှာလေးက တင်ငွေ၏ ရင်ခွင်ထဲသို့ မျက်နှာအပ်ကာ တိုး၍ဝင်လာသည်။ သူမ၏ အသက်ရှုသံလေးတွေမှာ ပြင်းပြင်းလေး ဖြစ်ကာ ဥမ္မာတစ်ယောက် ဘာကြောင့်မှန်းမသိ မောနေရသည်။ သူမ၏လည်ဂုတ်ပေါ်မှ တင်ငွေ၏လက်က သူမ၏ ကျောပြင်လေးပေါ်သို့ ရောက်၍သွားကာ ပြည့်ပြည့်တင်းတင်း ကျောပြင်လေးပေါ်တွင် ရွရွလေး ရွေ့လျားကာ ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေသည်။ နှစ်ယောက်သားထိတွေ့မှု အာရုံတစ်ခုထဲတွင်သာ စူးနစ်နေကြသည်ဖြစ်၍ တဦးနှင့်တဦး စကားမဆိုမိကြချေ။ ဥမ္မာ၏ ဖောင်းဖောင်းကစ်ကစ် ဖင်သားကြီးနှစ်ခြမ်းကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် အိကနဲ အိကနဲ ဖွဖွလေး ဆုတ်နယ်ပွတ်သပ်ပေးနေသော တင်ငွေ၏လက်က သူတို့ နှစ်ယောက်၏ ကြားသို့ တိုး၍ ဝင်လာသည်။ တင်ငွေ၏ရင်ခွင်တွင်မျက်နှာအပ်ထားသော ဥမ္မာ၏ရင်ဘတ်လေးက နောက်သို့ခွာ၍ ပေးလိုက်သည်။တင်ငွေ၏ရင်အုပ်ပေါ်တွင် မေးတင်ထားသော သူမ၏မျက်နှာလေးကတော့ မျက်လုံးလေးတွေ မပွင့်သေးချေ။ ဥမ္မာ၏ ဖင်သားကြီးတွေပေါ်မှတဆင့် သူတို့နှစ်ဦး၏ကြားသို့ တိုးဝင်လာသော တင်ငွေ၏ လက်က ဥမ္မာ၏မို့မို့စွင့်စွင့်လေးဖြစ်နေသော ရင်သားတွေကို တလုံးပြီးတလုံး အုပ်၍ ဖွဖွလေး ဆုတ်ပေးနေသည်။ တစ်ဦး၏နှလုံးခုန်သံကို တဦးက ကြားနေရသည်။ အပေါ်မှ အင်္ကျီလေးတစ်ထပ်နှင့် အတွင်းမှ ဘော်လီလေး တစ်ထပ်ရှိနေသော်လည်း နို့အုံလေးများသည် ဖွံ့ထွားနေသောကြောင့် တင်ငွေ၏ လက်ထဲတွင် အတိုင်းသားလေး နီးပါး နှုးအိ၍နေရသည်။ ရင်ထဲတွင် မွန်းကြပ်လာရုံမျှမကဘဲ ဥမ္မာတစ်ယောက် နေရထိုင်ရတာပင် တဖြေးဖြေး အနေခက်၍ လာရသည်။ ” အ… ကို … ” ” … အင်း .. ” ” … ပြန် … ပြန်ကြရအောင် … အကိုရယ်… နော် .. ” ရင်ထဲတွင် မွန်းကြပ်၍ လှိုက်မောနေသောကြောင့် မနဲပင်အားယူ၍ ဥမ္မာခမျာ တလုံးချင်း ပြောနေရသည်။ ပြောပြီးသည်နှင့် ဥမ္မာက သူမ၏မျက်လုံးလေးများကို အားယူ၍ ဖွင့်ကာ တင်ငွေ၏ ရင်ခွင်ထဲမှ သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ခွာလိုက်သည်။ တင်ငွေက သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးပေါ်မှ သူ၏ လက်များကို ဖယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှ ရုတ်တရက် လူချင်းကွာသွားပြီဖြစ်သော ဥမ္မာ၏မျက်နှာလေးကို ဆွဲ၍ယူကာ တင်ငွေသည် သူမ၏မျက်နှာလေး တစ်ခုလုံးကို အငမ်းမရ နမ်းလိုက်သည်။ ဥမ္မာကလဲ သူမ၏ သနပ်ခါးအဖွေးသားနှင့်မျက်နှာလေးကို အလိုက်သင့်လေး မော့၍ ပေးရှာသည်။ မျက်နှာလေးတစ်ခုလုံးအနှံ့ကို အားရအောင်နမ်းပြီးတော့မှ လူချင်းပြန်၍ခွာလိုက်ရာက သူမ၏ခါးလေးကို သိုင်း၍ဖက်ကာ ထူပေးလိုက်ရင်း တယောက်၏ခါးကို တစ်ယောက်ကဖက်လျှက် ထိုနေရာလေးမှ ရွေ့ရွေ့ ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါလေတော့သည်။ လေပြေနုလေးကတော့ မကြာခဏ တစ်ခါပြီးတခါ သူတို့နှစ်ယောက်ကို တိုးဝှေ့ဖြတ်သန်း သွားခဲ့သော်လည်း သူတို့နှစ်ယောက်၏ ရင်တွင်းမှ ပူနွေးဆဲဖြစ်သော အချစ်မီးအရှိန်ကိုတော့ ရုတ်ချည်းဆိုသလို အေးမြ၍ မသွားနိုင်ပါချေ။ ချစ်ရသူအတွက် စပို့ရှပ်လေးဝယ်ပေးမည်ဟု စဉ်းစားထားခဲ့သော်လည်း မနက်ပိုင်း ပစ္စည်းတွေ သွားဝယ်တော့ ကွမ်းဈေး ကွမ်းသီးဈေးကွက်က ရုတ်ချည်းဆိုသလို တက်၍နေသည်။ ဥမ္မာ မူးစု ပဲစုဖြင့် စုဆောင်းထားသော ငွေသုံးထောင်မှာ အရင်းအနှီး ကုန်ပစ္စည်းဖိုးထဲသိုပ ပါသွားသည်။ တင်ငွေက လကုန်ရင် မင်္ဂလာဆောင်မည်ဖြစ်သော သူ၏အကိုဝမ်းကွဲ မင်္ဂလာဆောင်သို့ ဝတ်သွားလိုသည်ဖြစ်၍ လကုန်ရန်မှာလဲ တစ်ပတ်ခန့်သာ လိုတော့သည်။ နောက်ထပ် ထပ်စု၍ မရနိုင်တော့။ မမှီနိုင်တော့ချေ။ ဒါကြောင့် ဥမ္မာသည် တဈေးလုံး အားကိုးအားထားရာဖြစ်သော ဦးမောင်တင်ထံသို့ပင်ပြေးခဲ့ရလေတော့သည်။ ဦးမောင်တင်၏အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ဥမ္မာသည် အိမ်ထဲသို့ ငဲ့၍ကြည့်လိုက်သည်။ ” … ဟယ် … မမ သီကြီး … ” သူမ၏နှုတ်မှ မအော်မိစေရန် ဥမ္မာသည် အတော်ပင် သတိထားလိုက်ရသည်။ သူမတွေ့မြင်လိုက်ရသော မသီ၏ခါးတွင် ထဘီက မရှိ။ သူမ၏ထဘီက အိမ်ထောင့် တနေရာရှိ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ပုံရက်သားလေး ရှိနေသည်။ ထို့ပြင် မသီသည် လေးဘက်ကြီး ကုန်းပေးထားပြီး သူမ၏ဖင်ကြီးကို ဦးမောင်တင်က သူမ၏နောက်မှနေ၍ ဒူးထောက်ပြီးခွ၍လိုးနေသည်ကို ဥမ္မာ တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ “ ပြွတ်…. ဘွတ်… စွပ်…. ပြွက်… “ “ နင့် စောက်ဖုတ်ကြီးက ကျယ်လာသလိုဘဲနော် … ” “ အော် … ရှင်ဘဲ နေ့တိုင်း ကျမကို ခေါ်ခေါ်ပြီး လိုးနေတာလေ … “ “ ဟဲ .. ဟဲ ….. စတာပါကွာ…. ဒီစောက်ဖုတ်ကြီးကိုဘဲ အကိုကြီးက လိုးလို့ အားရတာပါ.. “ “ တော်စမ်းပါ…. ရှင် … ဥမ္မာကို လိုးချင်နေတာ မသိဘူးမှတ်နေလို့လား… ဟင်း …. “ “ … ဟဲ.. ဟဲ… မဟုတ်ပါဘူး…ဟာ …. နင်ကလဲ… “ “ ဘာမဟုတ်တာလဲ … ရှင်…ဘဲ … ဥမ္မာကို လိုးရရင် ကောင်းမှာဆိုပြီး … ပြောပြီးတော့… “ “ .. ငါက … နင့်ကို မခံချင်အောင် စတာပါဟာ … “ “ ရှင်…. ရရင်ရော မလုပ်ချင်ဘူးလား… “ “ ဟင်း.. ဟင်း… ဒါကတော့ ဟာ … ဟဲ…ဟဲ.. “ “ ဘွတ်…ဘွပ်… ဘွပ်… ပြွတ်… “ “… အင့် … အင်း… ဖြေးဖြေးလုပ်စမ်းပါရှင်…. ဆံပင်တွေပြေကျကုန်ပြီ… တခါထဲ.. တအားဆောင့် နေတယ်… “ မသီ၏ အသံက တုံတုံယင်ယင်ဖြင့် တိုးတိုးလေးဖြစ်ပြီး မောသံလေးတွေ ပါနေသည်။ “ …. မင်း … ဒီလိုကုန်းပေးတာ…. ပိုပြီး မြန်တယ်…. သိလား …. “ “ အခု …. ဘယ်နှစ်ချီပြီးသွားပြီလဲ…. “ “ … နှစ်ခါ… “ “ ကဲ.. ဒါဆို ဖယ်တော့… ကျမ…. လှန်ပေးမယ်… “ ဦးမောင်တင်က သူ၏လီးတန်ကြီးကို မသီ၏စောက်ပတ်ထဲမှ ဆွဲ၍ထုတ်လိုက်ရာ “ ပြွတ် “ ကနဲ ဆိုသော အသံဖြင့် အရည်များပေကျံ စိုရွဲနေသော လီးတန်ကြီးက အပြင်သို့ ထွက်၍လာသည်။
မသီ၏စောက်ပတ်ဝမှ စောက်ရည်နှင့် သုတ်ရည်များ ပွက်ကနဲ အန်ကျလာသည်။ စောက်ဖုတ်ထဲမှ ထွက်လာသော ဦးမောင်တင်၏ လီးချောင်းကြီးသည်လည်း အရည်တွေ အမျှင်တန်းပြီး အရည်တများများဖြင့် ဖြစ်၍နေသည်။ မြင်နေရသော ဥမ္မာ၏စောက်ပတ်အုံကြီး တခုလုံး တင်းကနဲ တင်းကနဲ ဖြစ်၍ လာသည်။ သူမ၏ နို့သီးလေးကလဲ တဖြေးဖြေး မာလာသည်။ ဦးမောင်တင်၏ လီးတန်ကြီးက မသီ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲမှ ထုတ်ပစ်လိုက်ပြီးသောအခါ တွင်တော့ မသီက သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ပက်လက်လှန်၍ ချလိုက်ကာ သူမ၏ ခြေနှစ်ချောင်းကို မြှောက်၍ ပေးလိုက်သည်။ ဥမ္မာတစ်ယောက် အံ့သြသွားသည်။ မသီ၏စောက်ဖုတ်ကြီးသည် အလွန်ပင် ကြီးမား ဖောင်းကားနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဦးမောင်တင်၏လီးကြီးက ထိပ်ဖူးသေးသော်လည်း အရင်းတုတ်ကာ ဆောင့်အားပြင်းပုံရသည်။ ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားမှ ပြူးထွက်နေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဦးမောင်တင်က ရိုးရိုးမလိုး မသီ၏ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆွဲယူ၍ ဖြဲပေးခိုင်းသည်။ မသီက သူမ၏စောက်ပတ်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲဖြဲပေးသည်။ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားကြီးများက ရဲရဲနီနေသည်။ ဦးမောင်တင်သည် ပင်ကိုယ်က အသားမဲသူ ဖြစ်သည်။သူ၏လီးထိပ်ကြီးက ရဲနေသော်လည်း လီးချောင်းကြီး တချောင်းလုံးကမှု မဲပြောင်နေသည်။ ပုဆိုးမပါသော ဦးမောင်တင်၏ ဖင်ကြီးက မဲပြောင်၍နေပြီး ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားမှ အမွှေးမဲကြီးများ ထိုးထွက်နေသည်ကိုလဲ ဥမ္မာက မြင်ရသည်။ မသီက သူမ၏လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဖြဲပေးလိုက်သည်နှင့် ဦးမောင်တင်က သူ၏လီးတန်ကြီးကို တေ့လဲတေ့ ထိုးလဲထိုး လိုးသွင်းလိုက်လေသည်။ပြီးတော့ စိတ်တွေ အတော်ထနေပုံရသော ဦးမောင်တင်က မရပ်မနားပင် ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ ဆက်တိုက်လိုးလေတော့သည်။မသီ၏ဖင်ကြီး ပြားပြားကျသွားအောင်ပင် ဆောင့်၍ လိုးနေပုံမှာ ဂွေးအုကြီးတွေပင် ကျွှံ၍ မသီ၏စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ ဝင်သွားမလောက် ပြင်းထန်လှသည်။ ” ဘွတ်… ပြွတ်…. ဘွတ်…. ဘွတ်…. “ “… အင့်….အင့်…. ဆောင့်…. ဆောင့်…. ကျွတ်…ကျွတ်… ခပ်သွက်သွက်လေး ဆောင့်စမ်းပါ အင့်… “ ဥမ္မာတစ်ယောက် ကြည့်နေရင်းမှ သူမ၏ aစာက်ဖုတ်လေးကို လက်ဖြင့်အုပ်ထားမိသည်။သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ ယားကျိကျိဝေဒနာကို ခံစားနေရသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ယခုအချိန်တွင် မိမိအား တင်ငွေလာပြီး လိုးစေချင်သည်။စိတ်ကြွနေ စိတ်ထနေစဉ်တွင် တင်ငွေ တစ်ယောက်အနားတွင် ရှိနေစေချင်သည်။ “… ဟိတ်…. ဘာချောင်းနေတာလဲ … “ “… ဟင်…. ကိုခင်ဝင်း …..” အခြောက်ခင်ဝင်းက စပ်ဖြဲဖြဲနှင့် အိမ်အတွင်းသို့ လှမ်း၍ကြည့်သည်။ အိမ်အပြင်မှ လူသံကြား၍ အထဲမှ ငြိမ်သွားကြသည်။ခဏအကြာတွင် ခြေသံများကြားလိုက်ရသည်။ “ … လာ…လာတွေ့သွားရင် မကောင်းဘူး… “ အိမ်၏ဘေးနားတွင် ထင်းတွေထားသော တဲလေးတစ်လုံးရှိသည်။ ဥမ္မာနှင့် ခင်ဝင်းတို့ ထိုတဲတွင်းသို့ ဝင်လိုက်ကြသည်။ အ်ိမ်ထဲမှ ဦးမောင်တင် ပုဆိုးပြင်ဝတ်ရင်း ထွက်လာသည်။ဟိုကြည့်ဒီကြည့် လုပ်၍ ပြန်ဝင်သွားသည်။ “ နင်…. ဘာလာလုပ်တာလဲ… “ “…ကျ…. ကျမ… ပိုက်ဆံ…. လာချေးတာ….” “… သူတို့ လုပ်နေတာနဲ့ တန်းတိုးရောလား…. “ “… အို…. “ ဥမ္မာ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဘဲ ခေါင်းငုံ့ပစ်လိုက်သည်။ “ နင်ချောင်းကြည့်မှန်း သိရင် ပြဿာနာဘဲ…” “ဟို…. ကျမ… တမင်ချောင်းကြည့်တာ မဟုတ်ပါဘူး..” “အေးလေ…. ချောင်းတော့ ချောင်းတာဘဲမို့လား… ဟဲ…ဟဲ….” ဥမ္မာ၏တကိုယ်လုံး တုန်တုန်ခိုက်ခိုက်ဖြစ်လာသည်။ဦးမောင်တင်နှင့် မသီတို့ လိုးနေသည်ကို ချောင်းကြည့်မိခဲ့ခြင်းကိုပင် နောင်တရနေမိသည်။ခင်ဝင်း၏ ကိုယ်မှ ရေမွှေးနံ့သင်းသင်းကို ရှုရှိုက်မိသည်။ ခင်ဝင်းက ဆောင့်ကြောင့်လေးထိုင်ကာ ဒူးနှစ်လုံးကို ပူးကပ်၍ထားသော ဥမ္မာ၏တင်ပါးကြီး ကို ဖွဖွလေး ပွတ်သည်။ဥမ္မာက ဆောင့်၍တွန်းပစ်လိုက်သည်။ရုတ်တရက်ထပြေးဖို့က မလွယ်။အိမ်ရှေ့ က ဖြတ်ပြီး ခြံဝသို့ သွားရပေဦးမည်။ “ ဥမ္မာ လိုတဲ့ငွေကို ကျွန်တော် ကူညီပါရစေနော်…. “ ခင်ဝင်းက အချိုသတ်သည်။ “ … အို…. ဟင့်အင်း… မယူဘူး….” ဥမ္မာက ထိုင်ရက်သားလေးပင် ရွေ့၍ ထိုင်သည်။ “ ကျွန်တော်… ဥမ္မာကို ကူညီတာပါ… ဥမ္မာရယ်.. နောက်ပီး… ဥမ္မာကို ဟိုးအရင်ကထဲက လုပ်ချင်နေတာပါ… ခံပါနော်… “ ဥမ္မာတစ်ယောက် အာစေးထည့်ထားသလို ဘာသံမျှထွက်မလာ… ဦးမောင်တင်နှင့် မသီတို့ ပုဆိုးမရှိ ထဘီမရှိ လိုးနေကြသည်ကို မြင်ရပြီးကထဲက သူမစိတ်တွေက ဆောက်တည်ရာမရလောက် အောင် ဖြစ်နေသည်။ ခင်ဝင်း၏ လက်တဖက်က စောက်ဖုတ်ရှိမည့် နေရာ တင်းတင်းလေး ကို ပွတ်သပ်ပေးနေ ပြန်သည်။ အခုနကထဲက အရည်လေးများဖြင့် စိုစိုစိစိဖြစ်နေသော စောက်ဖုတ်ကြားမှ အရည်များ တားမရ ဆီးမရ ကျဆင်းလာသည်။
ထဘီလေးကို စွန်းကွက်ကုန်သည်။ခင်ဝင်းက ထိုခပ်တင်းတင်း ဖောင်းဖောင်း နေရာလေးကိုပင် ခပ်ဖိဖိလေး ပွတ်လိုက်ရာ မထိရင်မဖြစ်သော စောက်စိထိပ်လေး ကို ပွတ်မိသွားသည်။ “ …. အာ…. ကျွတ်…. “ ဥမ္မာက သူမ၏ဖင်လေးကို ဆတ်ကနဲ ယောင်ပြီး ကြွလိုက်မိသည်။ ခင်ဝင်း၏လက်ကိုလဲ ဒေါသဖြင့် ဆောင့်တွန်းပစ်လိုက်သည်။ တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် လေးကြိမ်သည်လိုဘဲ ခါထုတ်ပစ်တတ်သည် ကို ခင်ဝင်းက နောကြေပြီးသား ဖြစ်သည်။ “ကိုယ်…… အရမ်းလိုးချင်နေပြီ ဥမ္မာ ရယ် ….. “ “ သေလိုက်ပါလား…. “ တုန်တုန်ယင်ယင်နှင့် ပြောမိပြောရာ ပြောလိုက်သည်။ “ မင်း စောက်ဖုတ်လေးကို တခါဘဲ လိုးရရင် ကြေနပ်ပါပြီ… ငွေကိုလဲ မင်းလိုသလောက် ပေးမှာပါ… ပြန်ပေးစရာ မလိုပါဘူး… “ ဥမ္မာ တံတွေးကို မျိုချပြီး တုံ့ပြန်ရန် စကားကို ရှာသည်။သူမ၏ နဖူးဆံစလေးများတွင် ချွေးစေးလေးများ စို့ထွက်လာသည်။ “ လိုးကြရအောင်ကွယ်…. နော်…. “ ဥမ္မာ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို တွန်းလှဲလိုက်သည်။ ဒူးနှစ်လုံးကို ပိုက်ထားသော သူမ၏ လက်လေးများ ပြေသွားသည်။ ခြေထောက်လေးများမှာ ကွေးထားရာမှ ဆန့်ထွက်သွား၏။ အေးစက်သော မြေပြင်နှင့် သူမ၏ ကျောပြင်တို့ ထိကပ်မိသွားသည်။ ဥမ္မာ၏ရင်ထဲ ဒိတ်ကနဲ တုန်သွား၏။ ခင်ဝင်း၏ နီရဲသော မျက်ဝန်းအစုံက ခက်ထန်မာကြောလာသည်။ ခင်ဝင်း၏ ကိုယ်လုံးကြီးက ဥမ္မာ၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းပေါ်တွင် ခွလျှက်ထောက်ထားသည်။ “ အခြောက် “ ဟု အထင်သေးထားသော ခင်ဝင်းက ဘီလူးကြီးတစ်ကောင်နှယ် သန်မာ သွက်လက်နေသည်။ “ ကျ…. ကျမကို…. မလုပ်ပါနဲ့… ကိုခင်ဝင်းရယ် …” ဖင်လေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဖိအုပ်ထားရင်းမှ ပြောမိပြောရာ ပြော၍ ဥမ္မာက တောင်းပန်နေရှာသည်။ “ ဖယ်စမ်းပါ လက် “ ခင်ဝင်းက ဥမ္မာ၏ လက်ကို ကြမ်းတမ်းစွာ တွန်းဖယ်လိုက်သည်။ ဥမ္မာတစ် ယောက် ထိတ်လန့်သွားသည်။ သူမ၏ နို့မာမာလေးနှစ်လုံးကို ခင်ဝင်းက ဆွဲညှစ်သည်။ ဥမ္မာ၏ မျက်လုံးတွေ ပြာဝေသွားသည်။ အသိစိတ်တို့က ဝေဝါးထုံထိုင်းသွားကြသည်။ ခင်ဝင်း၏ ခန္ဒာကိုယ်ကြီးက သူမပေါ်သို့ ပြိုကျလာသည်။ ခင်ဝင်း၏ ရင်ဘတ်ကြီးကို တွန်း၍ ထောက်ထားလိုက်မိသော ဥမ္မာ၏ လက်အစုံက တဆတ်ဆတ် တုံနေသည်။ မာကျောသော ခိုးလိုးခုလု ပစ္စည်းကြီးက ဥမ္မာ၏ ရင်ထဲတွင် တလှပ်လှပ် ခံစားနေရသည်။ ဥမ္မာ၏ သွေးသားများ ပွက်ပွက်ဆူ၍ ထလာသည်။သူမ၏ တကိုယ်လုံး ပူနွေး၍ တက်လာရသည်။ သွားတွေကို စေ့စေ့ကိုက်ရင်း ပါးစပ်မှ အဖျားတက်သလို တဟင်းဟင်း ညီးတွားလာသည်။ “ ထဘီချွတ်လိုက်နော် …. ဥမ္မာ …” “ အို…. ဟင့်အင်း… ဟင့်အင်း… မချွတ်ဘူး… “ “ ကျွတ်… လုပ်ရတာ မလွတ်လပ်လိုက်တာကွာ… “ ဥမ္မာ၏ ထဘီအောက်စကို အတင်းဆွဲ လှန်ရင်း ခင်ဝင်းက ပြောလိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူ့ ပုဆိုး အောက်စကိုလဲ ဆွဲမလိုက်သည်။
နွေးထွေးသော အသားစိုင်လေးပေါ်သို့ လီးထိပ်ကြီးက ထိမိလိုက်သည်။ တင်းသော မာသော ပို၍ နွေးထွေးသော စိုစိလေးဖြစ်နေသော အရာအားလုံး ရောပြွန်းလျက် ထိတွေ့ခံစားလိုက်ရသည်။ ဥမ္မာ “ အွန့် “ ကနဲ တွန့်သွားသည်။ ပူနွေးဖိန်းရှိန်းသော အထိအတွေ့က အဝတ်မဲ့ အသားစိုင်နှစ်ခုကို ဖိန့်ဖိန့်တုန်သွားစေသည်။ ရှိန်းမြစွာ ခံစားလိုက်ရမှုက မွှေးညင်းငယ်များ ခေါင်းထောင်၍ လာရသည့်အထိလည်း စိတ်များ လှုပ်ရှားကြရသည်။ ခင်ဝင်းက နွေးအိသော ရင်သားလေးနှစ်မွှာ၏ အထက်တွင် ဖိကပ်ထားသော ခနွာကိုယ်အား မကြွဘဲ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆီးခုံကြားသို့ သွင်းပြီး လျှိုနှိုက်ကာ သူ့လီးကို ကိုင်၍ ဥမ္မာ၏ စောက်ဖုတ်လေးကို မကြည့်ဘဲ စမ်း၍ ထည့်သည်။ ခင်ဝင်း၏ လက်ဖျံက ဥမ္မာ၏ စောက်ဖုတ်အုံလေး နှင့် ဖိပွတ်မိကြသည်။ ဥမ္မာက ကယောင်ကတမ်း အသက်ရှုမြန်မြန်ဖြင့် ခင်ဝင်း၏ လက်မောင်းကို တအား ညှစ်ထားမိသည်။ လီးထိပ်က စောက်ဖုတ်အဝသို့ ပူနွေးအိစိုစွာ တေ့ကပ်မိသည်။ ခင်ဝင်းက သူ၏လီးကြီးကို နေသားတကျ အသင့်ပြင်ပြီးသည်နှင့် သူ၏လက်ကို ဆွဲနှုတ်လိုက် သည်။ ထို့နောက် ဥမ္မာ၏ ပုခုံးလေးကို စုံကိုင်ဆွဲကာ ဖင်အားနှင့် ဆောင့်သွင်း လိုက်သည်။ “ ပြွတ်…. ဖွတ်…. ဘွတ်… “ “ … အာ့….အာ… “ ဥမ္မာတစ်ယောက် နှာခေါင်းလေး ရှုံကာ မျက်နှာလေး ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်သွားသည်။ မညှာမတာ အလော သုံးဆယ် လိုးသွင်းလိုက်သော လီးထိပ်ကြီးက ထိကိုထိရမည်ဖြစ်သော ကာမအရသာဖူး စောက်စိ လေးထိပ်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖိတွန်းသွားခြင်းကို ခံလိုက်ရသောကြောင့်….. ဥမ္မာ၏ ပေါင်သလုံးသားတို့ မှ ခြေဖဝါး အစုံအထိ ဖြိုးဖြိုးဖျင်းဖျင်း ခံစားလိုက်ရသည်ဖြစ်၍ သူမ၏ ပါးနုနုလေး နှစ်ဖက်မှာလဲ ရှိန်းကနဲ ပူနွေးသွားရသည်။ တရှိန်ထိုးဝင်သွားသော လီးကြီးက တဝက်ခန့်အထိ တင်းတင်းလေး လိုးဝင်သွားကာ ဥမ္မာ၏ ထိတ်လန့်တကြား ညှစ်လိုက်မှုကြောင့် သူမ၏ စောက်ပတ်အတွင်းသား နုနုလေးများကြားတွင် ညှပ်သွားကာ စောက်ပတ် နှစ်ခြမ်းကြားတွင် တစ်ဆို့ဆို့ကြီး ဖြစ်သွားသည်။ ဥမ္မာက အံကြိတ်ရင်း မျက်နှာလေးကို တဖက်သို့ စောင်းထားရသည်။လေတိုးသံမှ အပ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေကာ ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးသည် နေ့ခင်းကြောင်တောင် ခြောက်ခြား၍ နေသည်။ ခင်ဝင်းကလဲ နေ့ပေါင်းများစွာ လပေါင်းများစွာ ကာလကြာရှည်စွာ အရိပ်တကြည့်ကြည့်ဖြင့် လိုးချင်နေခဲ့သော ဥမ္မာကို တကယ်လိုးရပြီမို့ အသကုန် လိုးနေမိသည်။ “ ဘွတ်… ဖွတ်… ဖတ်…ဖတ်… ဖွတ်…. “ “ .. ဟင့်….အင်း… ကျွတ်…ကျွတ်… အမလေး.. နော်… “ ဥမ္မာ၏ မျက်နှာပြင်လေး တစ်ခုလုံး ရဲရဲတောက် အောင်နီလာသည်။ သူမ၏ နုနုညက်ညက် ဖောင်း ဖောင်း ကစ်ကစ် ပါးဖွေးဖွေးလေးများမှာ ပုဇွန်ဆိတ်ခုန် ခုန်နေသည်။ ခင်ဝင်းက အဆင့်တက်လာသည်။ဒူးထောက်၍ ထိုင်လိုက်ပြီး ဥမ္မာ၏ စောက်ဖုတ်ကြီး ကို မက်မောစွာဖြင့် ငုံ့၍ ကြည့်သည်။ ဖောင်းကား စိုရွှဲနေသော ဥမ္မာ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ သူ၏ လီးချောင်းမာမာကြီး ဝင်လိုက် ထွက်လိုက် ဖြစ်နေသည်ကို စိမ်ပြေနပြေ ကြည့်ရင်း တပ်မက်စွာဖြင့် လိုးနေသည်။ ဖူးယောင်၍ တင်းပြောင်နေသော စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားကြီး နှစ်ခြမ်းက တင်းတင်းကြီး ကားနေသည်။ ခင်ဝင်း၏ လီးတန်ကြီးက စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ အားပါးတရ လိုးသွင်းလိုက်တိုင်း နှုတ်ခမ်းစပ် အသားလေးများက အထဲသို့ လိပ်လိပ်ဝင်သွား၍ နေကြသည်။ တဖန်သူမ၏ စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးတန်ကြီးက ပြန်ထုတ်လိုက်လေတိုင်း စောက်ဖုတ်ထဲမှ အတွင်းသား နီနီရဲရဲ နုနုလေးများ ပြဲကနဲ ပြဲကနဲ ပါလာသည်။ ခပ်ကျစ်ကျစ် တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နှင့် စီးစီးပိုင်ပိုင် လေးမို့ လိုးနေရသည်မှာ ခင်ဝင်းအဖို့ ဘယ်အရာနဲ့မှ မတူ အရသာတွေ ထူးနေရသည်။ လီးတန်ကြီးကို ဥမ္မာ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထုတ်ချီ သွင်းချီဖြင့် လိုးနေရင်းက ခင်ဝင်းသည် သူ၏ ဖင်ကြီးကို စောင်း၍ လီးတန်ကြီးကို စောက်ခေါင်းထဲတွင် ကန့်လန့်ဖြတ်အောင် လုပ်လိုက်သည်။ ထိုအခါတွင်တော့ မာကြောလှသော လီးချောင်းကြီး စောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲတွင် ကန့်လန့်လေး ဖြစ်သွားပြီး စောက်ပတ်ထိပ်ဝမှ စောက်စေ့ထောင်ထောင်ရဲရဲလေးကို ဖိကပ်လျှက် ဖြစ်သွားသည်။ဆောင့်သည်။ ခင်ဝင်းက အားရပါးရပင် ဆောင့်၍ အဆက်မပြတ် လိုးပစ်လိုက်သည်။ “ ဘွတ်…. ဖွတ်…. ပြွတ်…. ဘွတ်…. “ “ အင့်…. အိုး…. ဟိုး…. အင်း…. ဟင်း…. ကျွတ်…ကျွတ်… ကျွတ်…. “ တစ်ချက် တစ်ချက် ဥမ္မာ၏ လက်လေးက ခင်ဝင်း၏ ရင်ဘတ်ကို လှမ်း၍ တွန်းသည်။
သို့သေ်ာ ခုနှစ်ချက် ရှစ်ချက်မျှ စောက်ဖုတ်လေးထဲတွင် လီးချောင်းကြီးက ကန့်လန့်လေးဖြတ်လျှက် စောက်စေ့လေးကို ကြိတ်ကာ ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ လိုးသွင်းခြင်းကို ခံလိုက်ရသောအခါ…. “ ပြွတ်…. ဘွတ်…. ပလွတ်….. စွပ်…. ပြွတ်……” “…. အမေ့…. အား….ဟား….. အား…. ပါး….ပါး….” ဥမ္မာ၏ လက်လေးနှစ်ဖက်က ခင်ဝင်း၏ ခါးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ကိုင်လိုက်ရင်း သူမ၏ ခါးလေးမှာ အတော်ပင် ကော့တက်ကာ ဥမ္မာ၏ ခေါင်းလေးကတော့ ဆံပင်လေးများ ဖွာလံကျဲသွား သည်ထိ ခါယမ်းသွားတော့လေသည်။ “…ကောင်း….. ကောင်း..လိုက်တာ… ဥမ္မာ… ရယ်…” ခင်ဝင်းက မချိမဆန့် အသံဖြင့် မြှင်းမြှင်းလေး ပြောလိုက်ရင်း သူ၏ဖင်ကြီးကို ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ဆောင့်ကာ ဖိကပ်လိုက်ပြီး သုတ်ရေများကို ဒလဟော ပန်းထည့်လိုက်လေတော့သည်။ ဥမ္မာတစ်ယောက် စောက်ခေါင်းတလျှောက် သားအိမ်ထဲထိပင် နွေးကနဲ ပူကနဲ ခံစားလိုက်ရချိန်တွင် တော့ သူမ၏ ဖြူဖွေးသွယ်လျသော လက်လေးနှစ်ဖက်က ခင်ဝင်း၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို အတင်းပင် ကြုံး၍ ဖက်ကာ တဟင်းဟင်း ဖြင့် တုန်တက်သွားပါလေတော့သည်………ပြီးပါပြီ။